विहेपछि महिला मोटाउँने र पुरुष दुब्लाउने किन हुन्छ, यस्तो छ वैज्ञानिक १० कारण – Krazy NepaL
February 14, 2021 1113
बिबाह बारे धेरैलाई थाहा छ । पुरुष र स्त्रीबिचको सम्बन्ध गास्नु नै खासमा बिबाह हो । उमेर पुगेपछी बिबाह गरी परिवार बनाउने धेरैको सोच हुन्छ । बिबाह गर्नुअघि पुरुष र स्त्री दुबैले एक अर्कालाई मनपराएर नै बिबाह गर्ने गर्छन । यदि तपाई पनि बिबाह गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने केहि कुराहरु जान्नु जरुरी छ । खासमा पुरुष मित्रहरु कुनै स्लिम स्त्रीलाई मन पारेर विहे गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने एउटा कुरामा सम्झौता गर्नैपर्छ ।
खासमा महिलाहरु बिहेपछी ढि आत्मविश्वासी बन्ने र आफ्नो जिउडाल र सुन्दरताको मामिलालाई कम मात्र महत्व दिने गरेको पाइएको छ । जसले गर्दा महिलाहरु बिहेपछी मोटो हुदै जान्छन् । ओहायो विश्वविद्यालयमा गरिएको उक्त अनुसंधानमा पुरुषहरु भने विहेपछि दुब्लाउने र डिभोर्सपछि मोटाउने गरेको पाइएको छ । रुषहरुले बिबाहपछी मानसिक मात्र होइन शारीरिक रुपमै बढि उर्जा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । बिहेपछी पुरुषहरु महिलाको भर गर्ने हुन्छन् भने डिभोर्स पछि एक्लो हुदा मोटाउछन् ।
साथै उनीहरुको शरीरमा पनि परिवर्तन देखिन्छ । उनीहरुको शरीर एकदमै मोटाउने तथा हिप एकदमै बढ्छ । आखिर बिहेपछि किन यस्तो हुन्छ त रु उनीहरुको नितम्ब किन फुल्छ ? एक सर्वेले के कुराले महिलाको शारीरिक स्वरूपमा परिवर्तन आउँछ ? यसको खोजी गरेको छ ।
युनिभर्सिटी अफ लिड्सका सोधकर्ताले गरेको अध्ययन अनुसार महिलाको हिपमा आउने परिवर्तनको कारण खोजिएको छ । यो सर्वेका लागि महिलाहरुको हिपको सबै भन्दा ठुलो भाग र कमरको सबै भन्दा पातलो भागको नाप लिइयो ।
यो पनि थाहा भयो कि जुन महिलाको कम्मर पातलो हुन्छ उनी \_हरु बच्चालाई सजिलै जन्म दिन सक्छन् । जसको हिप ठूलो छ उनिहरुलाई गर्भवती हुँदा खासै समस्या नहुने बताइएको थियो ।
१. अनिन्द्राः बिहेपछि धेरैजसो महिलाहरूको सुत्ने समय र दैनिकी बद्लिन्छ । थपिएको जिम्वेबारी बहन गर्दा गर्दै सुत्नको लागि पर्याप्त समयको अभावमा धेरैपटक अनिदो बस्नु पर्ने हुनसक्छ । कम्तिमा ७ घण्टा नसुत्नुको कारणले महिलाहरूको तौल बढ्ने गर्दछ ।
२. हर्मोनको परिवर्तनः
३. उमेरको असरः विभिन्न अनुसन्धानका अनुशार बिहेपछि बढ्दो उमेरसँगै महिलाहरूको मेटाबोलिजमको दर कम हुदै जान्छ । जस कारण शरिरमा भएको बोसोको घट्ने प्रकिया कम हुन्छ र तौल बढ्छ ।
४. सामाजिक दबाब कम हुनुः महिलाको लागि बिहे अघि राम्रो देखिन तथा राम्रो पती पाउनका लागि आफ्नो शरिरको फिटनेसलाई विशेष ध्यान दिएका हुन्छन । तर बिहे पछि यो दबाब कम हुन्छ , जसकारण महिलाहरु आफ्नो फिटनेसमा ध्यान दिदैनन् र तौल बढ्न जान्छ ।
६. टेन्सन बढ्नुः बिहेपछि धेरैजसो महिलाहरुलाई नयाँ वातावरणमा घुलमिल गर्न असहज हुन्छ । यसले त’नाब बढ्छ र साथसाथै तौल पनि ।
७. गर्भवती अवस्थाः सामान्यतया बिहे भएको १-२ बर्षपछि धेरैजसो जोडीहरु सन्तान जन्माउने गर्दछन। महिला गर्भवती हुँदा आउने हर्मोनको परिवर्तन तथा चुस्त पोषणको कारणले मोटोपन बढ्ने गर्दछ।
८. लापरवाहीः बिहेअघि महिलाहरु आफ्नो खानपिनलाई नियन्त्रणमा राखेका हुन्छन। तर बिहेपछि जिवनशैलीको कारण खानपिनमा खासै ध्यान दिन पाउदैन्न । त्यसैले तौल बढ्छ ।
१०. प्राथमिकतामा परिवर्तनः बिहेपछि पति र घरपरिवार अनुशारको रुटीन बन्नेगर्दछ । यसकारण महिलाहरु आफ्नो ध्यान राख्ने मौका पाउदैन्न र तौल बढ्छ ।
Prevघरमा माउसुली देख्नुभयो ? यस्तो हुनसक्छ संकेत
Nextहोचो भएर चिन्तामा हुनुहुन्छ ? अप्नाउनुहोस् मात्र यी ५ उपाय